Ụbọchị My Pet » Hawaii – Visting na gị Pita
Hawaii bụ a oria nkita free State mgbe Afrika United States na-adịghị, si otú anu ulo na e kwere n'ime Hawaii gwụla ma ha wee banye kwarantaini.
The Hawaii ome iwu ghọtara mkpa nke na-eme njem Pita nwe gbanwere iwu ka na ndị ọbịa ka Islands nwere ike mee ha Pita tinyere. Ugbu a ndị na-achịkwa nanị emetụta Nkịta & Nwamba.
Ọbụna chere na ha na-adịghị ka ọ mfe na ọ bụ ọnụ, ọ bụrụ na ị kwadebe nke ọma ha ga-hapụ gị Pita gị ozugbo n'elu mbata na Honolulu n'ọdụ ụgbọ elu.
Nzọụkwụ One – Unọ unam usọbọ Asambodo – Aghaghị ịbụ ihe mbụ – Ọ dịghị photocopies. Nke a akwụkwọ ga-enyere site na gị unọ unam usọbọ karịa 14 ụbọchị tupu gị rutere Hawaii.
Yana ịgba ọgwụ mgbochi: The Pita ga-abụrịrị na ọgwụ mgbochi ọrịa dịkarịa ala ugboro abụọ ya ndụ maka oria nkita na ndị yana ịgba ọgwụ mgbochi ga-ihe karịrị 90 ụbọchị iche. Ọ bụrụ na ogwu bụ nke otu afọ ikike ahụ ọhụrụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-aghaghị e mere karịa 12 ọnwa tupu Pita ọbịbịa na Hawaii. Ọ bụrụ na ogwu bụ nke afọ 3 ikike ahụ ọhụrụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-aghaghị e mere karịa 18 ọnwa tupu rutere Hawaii. Ke idaha ekededi ọhụrụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-aghaghị e mere ọ dịghị ihe karịrị 90 ụbọchị tupu rutere Hawaii.
The akwụkwọ gị unọ unam usọbọ ga haa na-adịbeghị anya ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ụbọchị, na aga ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ụbọchị. The akwụkwọ ga-egosi na ogwu aha, otutu ma ọ bụ Oghere Usoro ahụ nọmba, booster nkeji, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ụbọchị, ngafe ụbọchị ma ọ bụ nke onye ma ọ bụ atọ afọ ikike ụdị.
Ezi Ahụ Ike: The akwụkwọ ga-ikwu na Pita bụ ezi ahụ ike ma na ọ na e mesoo Akọrọ karịa 14 ụbọchị tupu rutere Hawaii na ngwaahịa Fibronil ma ọ bụ onye Ẹkot ogologo na-adịgide adịgide ngwaahịa. Egosi na akwụkwọ nke ụbọchị nke ọgwụgwọ na ngwaahịa na-eji.
Nzọụkwụ abụọ – Microchip The akwụkwọ gị unọ unam usọbọ ga haa ọnụ ọgụgụ nke ndị microchip ọ ga-ebu eziokwu na unọ unam usọbọ ike iṅomi mgbawa ọma.
The mgbawa ga-nke ọkọlọtọ US nke (Uchu) ma ọ bụ (Home Ọzọ) ụdị. The microchip ga-tinyere tupu Pita ọbara ule.
Nzọụkwụ atọ – OIE-FAVN oria nkita Blood Ule Ị ga-enwe a akwụkwọ site na mma laabu na-egosi na N'ihi nke ule karịrị ma ọ bụ hà 0.5IU / ml. The akwụkwọ ga-egosi na anu ulo microchip nọmba. The ọbara ule ga-eme karịa 18 ọnwa na-erughị 120 ụbọchị tupu rutere Hawaii.
Gị unọ unam usọbọ ga-a ọbara sample si gị Pita na ụgbọ mmiri ya na-:
180 Denison Okporo ụzọ
Mosier Ụlọ Nzukọ
Nzọụkwụ anọ – Ngwa Send na malite nke akwụkwọ ndị a – ọ dịghị photocopies ka:
Animal akpọpụ Alaka
State nke Hawaii
Itiba a cashiers ego ma ọ bụ ego iji na ego nke $165.00 n'ihi na Pita.
The akwụkwọ na ego ga na-abata 10 ụbọchị tupu Pita si mbata. Ebe ọ bụ na akwụkwọ-apụghị kwadebere gị unọ unam usọbọ karịa 14 ụbọchị tupu mbata ị ga-ezite ha ka ha site Federal Express iji ruo eru maka ọdụ ụgbọ elu ntọhapụ nke Pita.
Nzọụkwụ ise – Abịa Ị pụrụ nanị tinye Hawaii site Honolulu International Airport na na n'etiti awa 8 m na 9 pm. Gị Pita ga-si n'ọdụ ụgbọ elu na kwarantaini center dị na 99-951 Halawa Valley Road, Aiea, Hawaii 96701 – Ekwentị 808 483-7151.
Ị ga-bulie gị Pita na ọnọdụ